Sida loo noqdo qof wanaagsan - Talooyin loogu talagalay maskaxda firfircoon | Niman qurux badan
Alicia tomero | 26/11/2021 21:52 | Daryeelka shaqsiyeed, Ku habboon, Caafimaadka
Nolosheenna oo dhami waa jimicsi joogto ah oo caqabad iyo horumarin ah. Qaar badan oo naga mid ah waxay qabtaan dhaqdhaqaaqyada isku day inaad noqoto dad wanaagsan iyo kuwa kale oo kaliya waxay u baahan yihiin inay ku noolaadaan adduun aan la dhaqmin. Sida loo noqdo qof ka wanaagsan waxay geli doontaa dabeecadaha, rabitaannada iyo xitaa dareenka gudaha.
Waxaa jira cuntooyin in dadka hagi kara ee sida loo noqdo qof heer sare ah. Wax badan oo ka mid ah guulaha dadka waxay ku dambeeyaan guulo, laakiin dhinaca kale waxa hadheeyey hab-dhaqankaas, mar haddii ay sidaas oo kale cid ku tumanayeen oo ay wax u dhimeen.
1 Sida loo noqdo qof ka wanaagsan maalin kasta
2 Ka shaqee mahadnaqa iyo daacadnimada
3 Dhig dhibaatooyinka oo noolow hadda
4 Jeclaaw naftaada
5 Ha ka baqin inaad sameyso waxaad u malaynayso
6 Naftaada daryee oo nolol caafimaad qabta ha yeelo.
Sida loo noqdo qof ka wanaagsan maalin kasta
Muhiimadu waa gal naftaada, isku day in aad ka baxdo rogrogmadaas fikirkaaga sumaynaya taasna waa in aad ka shaqeysaa dhinacyo badan. Isku day inaad ku bilowdo mari sharciga muraayada, Haddii shay kugu dhibo qof, laga yaabee inay tahay waxa aad bilaabi lahayd inaad naftaada ka beddesho.
Muuqaal hal abuur leh Aad bay u caawisaa haddii si taxaddar leh loo sameeyo. Maalinta oo dhan waa inaan u helnaa xoogaa boos ah tnafaheena ku shaqaysta. Sida ugu fiican ee loo samayn karo waa raadinta wakhtigaas yar maalin kasta iyo in aan xidhno indhahayaga si aan u aragno nafteena gudaha. Maaha wax ku saabsan ka fiirsashada, laakiin waxay noqon kartaa waxa ugu dhow. Halkaa marka ay marayso waxaan ka muuqan karnaa gudahayaga oo aan ka shaqeyno wax yar maalin kasta.
Maxaa halkan ka bilaabaya? Sababtoo ah bilawga in la sawiro waxay noqon doontaa bilawga qiimee oo jeclow naftaada. Halkan waxaad ka shaqayn kartaa si ka sii wanaagsan mahad.
Ka shaqee mahadnaqa iyo daacadnimada
In la mahadiyo waa dabeecad togan iyo qalab awood u leh dadka oo dhan. Waxay ina dareensiisaa wanaag, sababtoo ah xaqiiqada qiimaynta wax kasta oo kugu xeeran, haba yaraatee, waxay noqon doontaa habka ugu wanaagsan ee lagu dareemo mahadnaqaas. Intaa waxaa dheer, fal kasta ama fal kasta oo uu qof kugu sameeyo, had iyo jeer waa inuu ahaado ku faraxsan oo aan la xakamayn. Qofkaasi wuxuu ku darsaday waqtigiisa iyo ujeedadiisa inay wax kuu qabtaan.
Sidaa si la mid ah ayaan uga hadlaynaa danaysasho, in la sameeyo waxyaabaha adoon sugin in aad wax ka hesho. Habka shaqo wanaagga waa qayb ka mid ah qaybtaas wadajirka ah ee ay tahay in mid walba laga soo qaato. Joogteynta hab-dhaqankan waxay naga dhigi doontaa inaan dareenno wanaag nafteena mustaqbalka fog. wuxuu abuuri doonaa caafimaad jireed iyo maskaxeed iyo fayoobid.
Dhig dhibaatooyinka oo noolow hadda
Inta badan mashaakilaadka nolosha ka dhasha nagama tagaan si sax ah ugu gudbi haddaynaan madaxeena ka bixin. Dheelitirnaanteenu waxay ka bilaabataa gudaha. Haddii aan si joogto ah u xasuusanno muuqaalladii hore ama aan nafteena ku jir dilno waxa dhici kara mustaqbalka, runtii ma awoodno inaan xakameyno shucuurteena. Waa inaan madaxeena ku quudinnaa wakhtigan xaadirka ah oo aynu si weyn u xakameyno. (Meditation wuxuu u shaqeeyaa si aad u wanaagsan kiisaskan).
Qodobkani waa muhiim, kamana hadlayno inaan noqono nacasnimo ama wax la mid ah, yeynan isku khaldin. Waa inaan si kalgacal leh oo kibir isu jecel, si aynaan u saamayn wax faallo ah oo ku xidhan wax nalagu canaantay. Haddii kuwa kale ay ogaadaan inaad ka xun tahay wax aadan si fiican u qaban, taasi waxay siin doontaa iyaga awood iyo Waxay kaa dhigi doonaan inaad hoos u dhigto gariirkaaga. Si aanay taasi u dhicin ma jirto wax ka wanaagsan in la helo run iyo jacayl badan.
Ha ka baqin inaad sameyso waxaad u malaynayso
Iyadoo dad badani weli joogaan, way iska daayeen sannadaha oo waxay ahaanayaan kuwo aan la arki karin dadka kale. Waxaa laga yaabaa in tani aysan ahayn habkaaga ama sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad ku tababarto.
Ha ka waaban inaad ka boodo caqabadaas, gudaha waxaad ku dhiiran wayday inaad samayso iyo inta ugu badan yaan laguu ogolaan inaad dhimato adigoo nool. Waxaad dareemi doontaa fiicnaan markaad sawirto wax kasta oo markii hore u ekaan kara wax aan macquul ahayn oo noqday caawinaad weyn dhamaadka.
Waa in aad rajo ka qabtaa si aad u samayso waa in aad nolosha ku sawiro maskax wanaagsan. Sida ugu fiican ee tan loo sameeyo waa adiga oo diiradda saaraya fikradahaaga noocyada kale. Dhammaanteen waxaan leenahay xoogaa dhibaatooyin ah iyo sida caadiga ah Waxaan diirada saareynaa fikradahayaga dhammaan eedeymahaas taban. Waa inaad beddeshaa habka fikirkaaga oo aad maskaxdaada u saartaa aragtiyo togan.
Waa maxay sababta aysan u wanaagsanayn in diirada lagu saaro fikradaha xun? Sababtoo ah mustaqbalka fog waxaa madaxaaga lagu qaban doonaa shay miisaan leh oo sidaas darteed wuxuu ku dambayn doonaa inuu saameeyo caafimaadka maskaxdaada. Waxay keeni doontaa fikrado xun, niyadda xun iyo dhaqanka anaaninimada.
Naftaada daryee oo nolol caafimaad qabta ha yeelo.
Is ogow naftaada oo lahow caadooyin caafimaad qaba waxay noqon doonaan soo jeedinta ugu fiican si aad maskaxdaada uga farxiso. Qofka naftiisa ku dadaala inuu si fiican wax u cuno oo aan nolol fadhiid ah samayn wuu awoodaa si aad uga wanaagsan ula tacaal walaaca. Sidan, waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaadan si xun u fikirin. Xaqiiqda ah in aad maskaxdaada u jeceshahay dhinaca wanaagsan waxay kaa dhigi doontaa deganaan, nabad iyo farxad. Sidan oo aad u oofiso ujeedooyinkaas dantaada ayaad ku noqonaysaa qof wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida loo noqdo qof wanaagsan